चाहा होकी बाध्यता ? पुजा–प्रदिपको भेट !FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
चाहा होकी बाध्यता ? पुजा–प्रदिपको भेट !
फिल्मी फण्डा । फिल्म प्रेम गीतमा औधी रुचाईएको जोडी हो पुजा शर्मा र प्रदिप खड्काको जोडी । प्रेम गीत फिल्म पनि हिट भएको फिल्म हो । त्यसपछि निर्देशक र निर्माताको टिम नै छुटिएपछि प्रदिप निर्माताको भागमा परे र पुजा निर्देशकको भागमा परिन् । विस्तारै ईगो हटले बोलचाल समेत बन्द हुदै गईरहेको थियो । दुई ध्रुर्विकरण जस्तै देखिएको थियो निर्माता सन्तोष सेन र निर्देशक सुदर्शन थापा बीच । यी दुबैको शिकारमा उस्तै तरिकाले पुजा र प्रदिप पनि प्रस्तुत हुन पुगे ।
भलै यी दुईले एक अर्काको वारेमा भने मिडियामा राम्रै कुरा गर्दै आईरहेका थिए । यी दुईलाई एकै ठाउँमा देखिएला वा सँगै भेटिएला भन्ने धेरैले सायद कमै सोचका थिए होलान् । तर बुधवार अकस्मात यी दुई कलाकार एकै ठाउँमा सँगै देखिए र मिडियलाई पोज दिई दिई फोटो खिचाए पनि । यी दुई बीच भेटवार्ता हुनुको पछाडी कसको हात छ ? या दुबैको चाहामा भएको थियो अथवा अकस्मात नै भएको हो ? त्यो विस्तारै थाहा होला ।
जे होस् दुबैले आफु कलाकार भएको कारण कलाकारिताको ईमान भने राम्रै तरिकाले देखाएका छन् । यदि दुबैमा उतिकै ईगो कायम भएको थियो भने अकस्मात भेट्दा पनि बोलचाल नगरी जान सक्ने बाटो थियो नै तर यी दुई बीच बोलचालसँगै फोटो खिच्नेसम्म पनि भयो । यस कारण पुजा र प्रदिपले असल कलाकारको भुमिका निर्वाह गरेको जस्तो सबैलाई लागिरहेको छ । सायद धेरै दर्शकलाई पुजा र प्रदिप पुनः पर्दामा देख्न पाईयोस् भने चाहना पनि कायमै होला । त्यो त तत्काल संभव देखिदैन तर भविष्यमा के हुने हो, त्यो पछि नै थाहा होला । यो भेट पनि खास हो र भेटको बहाना जस्तो भएपनि, कोही न कसैको चाहा नै हो भने पनि धेरैलाई लागिरहेको यतिखेर छ ।
तस्बिर : कुशल घतानी राई/ ramailochha.com
मण्डे मस्ती भिडियो पनि हेर्नुहोस् :